TAMAANDHADA "FARXAD RUUSH F1": SHARAXAAD, SIFOOYINKA BEERITAANKA EE KALA DUWAN - BEER CAGAARAN
Sidee si ulakac ah u koraan tamaandho dhadhan fiican leh "farxad Ruush F1"? Tilmaanta iyo astaamaha noocyada kala duwan
Tamaandhada leh magaca quruxda leh "Ruush F1 farxad" waa sida kuwa bannaanka u ah miro waaweyn, dhadhan fiican leh iyo iska caabin badan cudurada. Sababtoo ah sifooyinkaas, jilidkani wuxuu ku dhacay jacayl dad badan iyo ma niyad jabin.
Akhri faahfaahinta buuxda ee kala duwan ee maqaalkeena. Waxaan sidoo kale u sheegi doonaa halka uu ku dhexjirsan yahay geedka, sida loo koro si habboon, haddii ay u baahan tahay ka-hortagga cudurrada.
Tamaandhada "farxad Ruush F1": sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Raashin Ruush ah
Sharaxaad guud Xilliga bartamihii xilli-ciyaareedka aan dhexdhexaad ahayn
Foomka Kala-beegan-roogga yar-yar ee dhirta
Cunto dhexdhexaad ah 300 garaam
Noocyo dhaadheer 9 kg mitir labajibbaaran
Cadaadiska cudurada Cudurka dabaysha
Waa isku-biilka jiilka koowaad ee F1. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya hybrid iyo noocyo kala duwan ayaa ah mid aan macquul ahayn in sifooyinka tayada loo wareejiyo jiilka soo socda - abuurka ma soo saari doono goosashada wanaagsan sanadka soo socda. Dhirta waa mid aan caddayn, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro qodobbada koritaanka horumarinta miro wanaagsan, sida caadiga ah 6-8 buraashyo leh miraha ayaa laga tegayaa. By nooca baadiyaha - ma aha heerka.
Waxay leedahay dherer xoog leh, oo dhererkoodu ka badan yahay 2 m. Cunto-qabadku waa mid awood leh, oo la kobciyo, ka badan 50 cm Caleemaha waa cagaaran, cagaar mug leh, nooc "yaanyo" ah, qaabdhismeedka lakulmay, iyada oo aan loo ogolaanin. Inflorescence waxay leedahay nooc fudud oo dhexdhexaad ah. Duufaankii ugu horreeyay waxaa la dhigaa 7-8 caleemo, kadibna wuxuu ku yimaadaa bareeg ah 1-2 boog. Waxaa jira ubaxyo badan oo ku jira inflorescence, waxaa suurtogal ah in laga saaro dhowr ah si loo hagaajiyo oo u badiyo midhaha.
Ku dheji xayiraad. Sida laga soo xigtay heerka Bisaylkiisa - mid dhexdhexaad ah, miro baaluqan horeba waa 115 maalmood ka dib biqilka. Waxay leedahay boqolkiiba sarreysa oo ka soo horjeeda cudurada (fusarium, tubaakada sigaarka, verticillis, Alternaria). Horumarinta waxaa lagu helaa aqallada lagu koriyo (filimada iyo garoonnada dhalada leh).
Qaabka ayaa lagu soo koobay, oo ku dhegganaa sare iyo hoose, qashin dhexdhexaad ah. Cabbiradu waa weyn yihiin miisaankuna wuxuu ku eg yahay 300 g, waxay dhacdaa wax badan. Maqaarku waa mid qaro weyn leh. Midabka miro bislaaday waa casaan, dhirbaaxo - cagaar iftiin ah. Jidhku waa jilcan, casiir leh. Waa wax badan oo abuur ah, ayaa si siman loo qeybiyay 4-6 koobiyaal.
Waxaad isbarbar dhigi kartaa miisaanka midhaha kala duwan ee noocyada kala duwan ee miiska hoos ku qoran:
Raashin Ruush ah 300 garaam
F1 Hore F1 100 garaam
Shukulaatada 500-1000 garaam
Boqorka Siberia 400-700 garaam
Malabka pink 600-800 garaam
Honey iyo sonkorta 80-120 garaam
Demidov 80-120 garaam
Dimuquraad la'aan ilaa 1000 garaam
Arrinta qallalan - qadar yar. Miraha la soo ururiyey ayaa la keydiyaa muddo dheer, waxay leeyihiin aragti wanaagsan, gaadiidka si fiican ayaa loo dulqaatay. Sameeyeen saynisyahannada - beeraha ee Ruushka. Waxay ka diiwaan gashan tahay Diiwaanka Gobolka ee ku yaalla Ruushka ee beerista ciidda la xiray sannadkii 2010. Beeritaan la aqbali karo oo dhan ee Ruushka, Ukraine.
Sida loo isticmaalo waa mid caalami ah. Tamaandho waxay leeyihiin dhadhan macaan. Ku habboon isticmaalka cusub, sida badeecad gooni ah oo saladh ah, sanduuqyada. Ma dhumin dhadhanka inta lagu jiro foosha kulul. Wanaagsan ee ka shaqeeynaya jamacada, suugada iyo casiirka. Beerta qaarkeed waxay kortaa yaanyada "farxadda Ruushka F1" ee iibka. Waxay leedahay dhalid ka badan 9 kg halkii 1 sq. Iyadoo daryeel wanaagsan laga bilaabo 1 warshad waxaad heli kartaa ilaa 6 kg.
Raashin Ruush ah 9 kg mitir labajibbaaran
Aurora F1 13-16 kg mitir labajibbaaran
Leopold 3-4 kg ka baadiyaha
Sanka 15 kg mitir labajibbaaran
Argonaut F1 4.5 kg keynta
Kibits 3.5 kg ka baadiyaha
Siberia aad u culus 11-12 kg mitir labajibbaaran
Cream Honey 4 kg mitir labajibbaaran
Laba domes 4-6 kg duurka
Marina Grove 15-17 kg halkii mitir labajibbaaran
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cudurrada yaanyada ee lagu koriyo ee articles ee boggeena internetka, iyo sidoo kale habab iyo tallaabooyin lagula dagaallamo.
Waxa kale oo aad ku ogaan kartaa macluumaadka ku saabsan noocyo siyaado ah iyo noocyo cudur-u adkaysta, oo ku saabsan yaanyada aan ahayn dhammaanba u nugul phytophthora.
Dhibaatooyinka aan la ogaan, dib u eegista beeralayda oo kaliya wax wanaagsan.
Faa'iidooyinka la calaamadeeyay:
Waxay u adkaysantahay in la jajabiyo heerka jeermiska. Wuxuu jecel yahay waraabinta wanaagsan iyo quudinta. Abuuridda abuurka loogu talagalay geedo bisha Maarso waxaa lagu fuliyaa weel caam ah oo leh sunta sunta ah, ciribtirka. Carrabku waa inuu sarreeyaa aashitada oo ku dheggan oxygen.
Abuurka waxaa sida caadiga ah lagu nadiifiyaa xal daciif ah ee kaneecada ama walax kale, ka dibna maydhin oo lagu beeray qoto dheer oo ku saabsan 2 cm, oo leh fogaan ah 2-3 cm u dhexeeya dhirta. qoyaan gaar ah.
Goynta ayaa dhacda marka 2 qotodheer la sameeyey. Markii markii hore lagu beeray weel caam ah, qaadashadu waxay lagama maarmaan u tahay horumarinta nidaamka asaasiga ah. Cunnad ugu yaraan 2 jeer. 2 usbuuc ka hor qashinka si loo koriyo, geedo waa la adkaadaa, tani waxay u oggolaan doontaa in si wanaagsan loo wareejiyo dhibcaha heerkulka. Carrada ku jirta aqalka dhirta lagu koriyo waa in la nadiifiyaa oo kululeeyo ilaa 25 darajo xilliga beerto.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan ciidda loogu talagalay geedo iyo geedaha dadka waaweyn ee lagu koriyo. Waxaan kuu sheegi doonnaa nooca cayayaanka ee yaanyada ah, sida loo diyaariyo ciidda saxda ah adiga iyo sida loo diyaariyo ciidda aqalka dhirta lagu koriyo ee guga.
Da'da qiyaastii 50 cisho, geedo waxaa loo wareejin karaa ceelasha bacriminta, masaafada u dhaxaysa 50 cm. Dhalo waraabinta dhirta waxaa lagu fuliyaa xididka, si weyn. Mulching waa la soo dhaweynayaa. Dharka labiska iyo dabacsanaanta ugu yaraan 10 maalmood gudahood. Miisaanka waa lagama maarmaan. Ku xirashada taageerooyin gaar ah.
Kiimikada dabiiciga ah ee tallaabo guud oo ka dhan ah cayayaanka iyo cudurrada si fiican loo yaqaan waa lagama maarmaan. Farxadda Ruushka F1 - runtii farxad bay u tahay beerta, uma baahna wax dadaal ah si ay u koraan, natiijadu waa mid aad u fiican.
Waxaad ka heli kartaa noocyo kale oo leh shuruudo kala duwan oo la isticmaalayo jadwalka hoose: